UKUZIPHATHA | ZI-105 IZIKOLO | VULA I-akhawunti yeBhanki | NXAXHELANA NENGXAKI yeBhanki | Ukuvulwa kweAkhawunti yeBhanki, Vula iAkhawunti yeBhanki engaselunxwemeni
Vula iakhawunti yeBhanki kumazwe angama-106 nakumazwe angama-50 aseMelika
Iqala kwi- $ 100
Owona mnikezeli weenkonzo ubalaseleyo
Ukuvulwa kweakhawunti yebhanki yamanye amazwe phantse kuwo onke amazwe eHlabathi
Ukugcinwa kwemfihlo kuqinisekisiwe
I-Akhawunti yeBhanki yoBuntu. I-Akhawunti yeBhanki yeNkampani.
Ungayivula njani iAkhawunti yeBhanki
Nceda ukhethe ibhanki oyithandayo kwaye usithumelele ulwazi lwakho kunye namaxwebhu.
Ukulungiswa kwiphepha lemibuzo kunye namaxwebhu afunekayo ukuba ahlolwe nguwe kunye namagosa ebhanki.
Utyikityo kuwo onke amaxwebhu afunekayo ukuze ungeniswe. Kwiimeko ezimbalwa, umnxeba wevidiyo / weenkomfa kunye namagosa asebhankini ukuze kugqitywe inkqubo.
Konwabele ukusebenzisa iakhawunti yakho yebhanki yamazwe aphesheya nangaphandle kwempumelelo.
Khetha iAkhawunti yakho yeBhanki
[uqikelelo_isimo sefom_id = ”36 ″]
Bhrawuza iAkhawunti yeBhanki nguMimandla
[ii-concions id = ”4614 ″]
[ii-concions id = ”4613 ″]
Iinkonzo zokufudukela kwelinye ilizweInkxaso yokufudukela kwelinye ilizweImvume yokusebenzaUkufudukela kwelinye ilizwe kwiShishiniUkufudukela kwelinye ilizwe kusaphoUkuhlala okwethutyanaUkuhlala ngokusisigxinaUbumiInkqubo yokuTshintshwa kwabaThengiIiNkonzo zeVisaUkuqulunqwa kweNkampaniUkuvulwa kweAkhawunti yeBhankiIiNkonzo zeMpahlaUkuseta ishishini lamanye amazwe kunye nokwandiswaI ziShishinoUkuqulunqwa kweNkampaniCompanies ShelfUkuvulwa kweAkhawunti yeBhankiIshishini lokuthengisaIiakhawunti zoMthengisiIshishini lokuThengwaIOfisi eyiyoAmanani abalulekileyoIifowuni ezithambileyoUkukhupha iiakhawuntiUkushishina ngeelayisensiUbhaliso loRhweboIwebhusayithi eyenziwe ngokwezifisoUkuyila logoIsisombululo seCRMUkubonisana ngemfundoIsikhokelo sokwamkelwaUnxibelelwano lweYunivesithiUbhalisoIngcebiso kwezomthethoThenga iphakheji yezomthethoBhala iNyuloEmergencyIzisombululo eziHlalwayo eziHlalwayoUkufumana italenteUkuzingela IntlokoUkubonisana ngeHRUkuqeshelwa emsebenziniIndawo yomsebenziIzisombululo ze-ITUyilo lwewebhuUphuhliso IwebhusayithiUphuhliso lwezoqoqoshoUkuPhuhliswa kweeNkqubo zeMfonoUphuhliso lweZofthiweI-blockChain DevelopmentUkuSebenza kweeNjini zoPhandoMarketing yedijithaliIzisombululo zeVOIPThenga amanani amatshaIAkhawunti ephezuluIzisombululo zoQhakamshelwano kwizikoUkutshintsha kweLight ye-VoIPIsoftware ye-VoIP TunnelingIzisombululo ze CorporateIingcebiso ngezezimaliJika uQeqeshiInkxaso-mali yezixhoboInkunzi yomsebenziUqingqo-maxabiso kwiShishiniukuthobelaBhala iNyuloQala Inkxaso kunye nezisombululoInkqubo yokusebenzisanaubhalisoUmbuzo weNkonzoHlawulaIinkonzo zasimahlaIndawo yeZikhundla zoMsebenziIndawo echongiweyoIndawo yokuthengisa izindlu nomhlabaINethiwekhi yeNtanethi yoLuntuBhala iNyuloEzinye iiNkonzo
Uluhlu lokujonga umntu ngamnye
Uluhlu lokujonga iinkampani
Ixesha elingaphezulu, iiMillion Makers bezakhe ubudlelwane obunamandla kunye neebhanki zamazwe aphesheya kolawulo lwamazwe angaphezulu kwe-110.
Silandela ngokuqinile imigaqo yethu “yoKhathalelo M”:
Amaxabiso oKhuphiswano, Ivenkile enye yokuMisa, inkonzo eqondene nomntu, iNqaku elinye loQhakamshelwano, uMgangatho oManyeneyo, uMgangatho, ukuNgqinisisa, uKwazisa ngeNkcubeko eKhethekileyo, uMgaqo weTailor owenziwe, ubuchule boShishino oMeleleyo kunye nobutyebi bamava.
Inkqubo yokuvulwa kweeakhawunti zebhanki ibandakanya:
Uqinisekiso loxwebhu lomntu kunye nolweqela.
Ukuzaliswa kwefom yesicelo sebhanki ethi ithunyelwe kumthengi ukuze isayine nemiyalelo efunekayo.
Emva koko, sithumela iphakheji epheleleyo ebhankini ukuze ivunywe okokugqibela.
Emva koko, sibeka esweni inkqubo yokuvula iakhawunti kude kube ke kwabakho ixesha lokwabiwa kweakhawunti kunye ne-ofisi yebhanki.
Onke amaxabiso adweliswe kwiwebhusayithi yethu aluncedo kuphela kwinkqubo yokuvula i-akhawunti yebhanki kunye nesicelo kwaye ezi ziimali zethu zobizo kuphela kwaye ezi ntlawulo aziyi kuhlawula naziphi na iindleko zebhanki kunye neebhomishini zentengiselwano okanye ukulungiswa kweakhawunti okanye naziphi na ezinye iindleko.
Yonke imirhumo yethu yobuchule ichazwe kuphela kwiinkampani ezenza imisebenzi yeshishini ezingafuni naluphi na iphepha-mvume kunye nommiselo (umzekelo: ukubamba, ukurhweba, iinkonzo okanye iinkampani zepropathi yendawo ethengisa izindlu, njalo njalo). Ukuba inkampani yakho iqhubekeka nokujongana nemali yeqela lesithathu (umz. Ibroker broker, ii-equity, imali efanayo, njl. Njl.) Okanye nayiphi na enye inkampani enelayisensi kunye elawulwa ngugunyaziwe owaziwayo ngurhulumente, nceda unxibelelane nathi ngesibalo sexabiso.
Iibhanki zinelungelo ngokubona kwazo ukwamkela okanye ukwala izicelo zokuvula i-akhawunti, njengoko siza kukwazisa ebhankini kwaye sikukhokele kuyo yonke inkqubo yokuvula iakhawunti; Nangona kunjalo asinakuqinisekisa ukuba i-akhawunti yakho iya kuvunywa yibhanki kwaye ivulwe ngempumelelo.
Ngenxa yemigaqo yamazwe aphesheya, asizokwazi ukunceda kwinkonzo yokuvula i-akhawunti yebhanki kubemi bala mazwe alandelayo, Cofa apha: Amazwe angaGunyaziswanga yiFATF
Ikopi ebhalwe phantsi yencwadana yakho yokundwendwela esemthethweni
Ipaspoti kufuneka isayinwe kwaye utyikityo kufuneka luhambelane nokusayinwa kwifomu yesicelo. Ifoto kufuneka icace kwaye ikumgangatho olungileyo.
Ikopi yokoqobo okanye eQinisekisiweyo yecala lokunceda / lebhanki
(ukungqinisisa iidilesi zokuhlala, ezingadlulanga kwiinyanga ezi-3). Ibhaso lezinto ezisetyenziswayo ekhaya (umzekelo umbane, amanzi, irhasi, okanye umnxeba ohambelana nomnxeba kodwa akuyiyo ifowuni yetyala lefowuni, kulawulo oluninzi), kungenjalo, unokubonelela ngesitetimenti sebhanki, isitatimende sekhadi letyala okanye incwadi ebhaliweyo ngaphezulu kweenyanga ezi-3) njengobungqina bedilesi.
Ikopi yentsusa okanye eqinisekisiweyo yeleta ebhaliweyo yeBhanki
(ungadluli kwiinyanga ezi-3). Phantse zonke iibhanki kwilizwe liphela zikhupha "Ileta yokuBhekisa". Unakho ukucela incwadi ekubhekiswa kuyo ebhankini, apho ubambe i-akhawunti. Ileta yesalathiso kufuneka ibonise uqinisekiso lwexesha lobudlelwane, inombolo yeakhawunti, ngokungangqinelaniyo ngomhla kunye nokuchazwa "kokusebenza kwe-akhawunti okwanelisayo".
Ifomu ezalisiweyo ngokupheleleyo nesayinwe ngokupheleleyo
Incase, amaxwebhu anikezelweyo angekho kulwimi lwesiNgesi, kwimeko enjalo, uguqulelo oluqinisekisiweyo luyafuneka.
Xa onke amaxwebhu sele elungile nceda uthumele iikopi ezithambileyo kummeli wethu ukuze ziphinde zijongwe, kubaluleke kakhulu ukubonelela ngeefom ezizalisiweyo ukuphepha ukulibaziseka kwinkqubo yokuvula i-akhawunti.
Ambalwa Amazwe apho kufuneka kuphela ikopi yokundwendwela kunye nokuguqulela ipasipoti.
Inkampani yethu ichasene nokuThengiswa kweMali, ukuThengiswa kweziyobisi, ubuGrogrisi kunye nokuThuthukiswa kwabantu, ngenxa yoko, ASIKUKHUSELEKILEYO INKXASO YABADLALI.
Ukuqeshwa kwakhona kokuvula iAkhawunti yeBhanki yeZiko
Iseti yamaxwebhu enkampani asemthethweni abandakanya:
Imemorandam kunye namaNqaku oMbutho, amaxwebhu aqinisekisa ukuqeshwa komlawuli (neenkampani) kunye nonobhala (ukuba ukhona), uxwebhu oluqinisekisa iofisi ebhalisiweyo, iSiqinisekiso seZabelo, iZatifikethi zokuma okuhle, kwimeko, inkampani ingaphezulu kweenyanga ezili-12 ubudala.
Cofa ikopi ecacileyo yolwakhiwo lwendibaniselwano, ichonga abanini (s) abaluncedo
Ilayisensi esebenzayo (ukuba iyasebenza)
Kumlawuli ngamnye, kubanini-zabelo, unobhala, umntu osayinileyo ogunyazisiweyo kunye nomnini wokugqibela onenzuzo:
Ikopi ebhalwe phantsi yencwadana yokundwendwela esemthethweni.
Ipaspoti kufuneka isayinwe kwaye utyikityo kufuneka luhambelane nokusayina kwifom yesicelo.
Ifoto kufuneka icace kwaye ikumgangatho olungileyo
Ikopi yoqobo okanye eQinisekisiweyo yecala lokugcina / ingxelo yebhanki (yokuqinisekisa iidilesi zokuhlala, engadlulanga kwiinyanga ezi-3) Ibhaso lezinto zokusetyenziswa ekhaya (umzekelo umbane, amanzi, irhasi, okanye umnxeba ohambelana nomnxeba kodwa akuyiyo ifowuni yetyala lefowuni, kulawulo oluninzi), kungenjalo, unokubonelela ngesitetimenti sebhanki, isitatimende sekhadi letyala okanye incwadi ebhaliweyo ngaphezulu kweenyanga ezi-3) njengobungqina bedilesi.
Ikopi yokoqobo okanye eqinisekisiweyo yencwadi ebhaliweyo yeBhanki, ebhalwe ngaphezulu kweenyanga ezintathu. Phantse zonke iibhanki kwilizwe liphela zikhupha "Ileta yokuBhekisa". Unakho ukucela incwadi ekubhekiswa kuyo ebhankini, apho ubambe i-akhawunti. Ileta yesalathiso kufuneka ibonise uqinisekiso lwexesha lobudlelwane, inombolo yeakhawunti, ngokungangqinelaniyo ngomhla kunye nokuchazwa "kokusebenza kwe-akhawunti okwanelisayo".
Amandla eGqwetha (ukuba liyasebenza)
Kwigosa ngalinye elihlangeneyo (Apho abalawuli benkampani okanye abanini zabelo kumaqumrhu asemthethweni), nceda unikeze:
Ikopi yamaxwebhu omgaqo-siseko (ISiqinisekiso sokuNgena, amaNqaku, njl.njl.).
Ikopi yeRejista yoShishino (ebandakanya ukubhaliswa kwabaninizabelo, abalawuli kunye nonobhala).
Ikopi yoLwakhiwo loShishino.
Isiqinisekiso sokuma okuhle.
Ukuhlanjululwa, amaxwebhu anikezelwe ongekho kulwimi lwesiNgesi, kwimeko enjalo, uguqulelo oluqinisekisiweyo luyafuneka, vice-a-versa, ngenxa yezizathu ezimbalwa ezizezayo.
Xa onke amaxwebhu sele elungile nceda uthumele iikopi ezithambileyo kummeli wethu ukuze ziphinde zijongwe, kubaluleke kakhulu ukubonelela ngeefom ezizalisiweyo ukuphepha ukulibaziseka kwinkqubo yokuvula i-akhawunti. Inkampani yethu ichasene nokuThengiswa kweMali, ukuThengiswa kweziyobisi, ubuGrogrisi kunye nokuThuthukiswa kwabantu, ngenxa yoko, ASIKUKHUSELEKILEYO INKXASO YABADLALI.
Ukuba uqhuba umsebenzi ngaphandle kwelayisensi efunekayo okanye ugunyaziso olunikezwe ngumphathi ofanelekileyo, thina kwiiMiliyoni zeSigidi asizukukunceda ngeenkonzo zokuvula iakhawunti yebhanki ezinxulumene nomsebenzi ongabhalwanga.
Bambalwa Imizekelo yemisebenzi enelayisensi: Ukudlala, ukuNgcakaza, iiLottery, ukubonelela ngeenkonzo zemali ezibandakanya urhwebo / urhwebo ngaphandle kwemali yangaphandle, ishishini lebhanki, ishishini leinshurensi, ukusebenza nolawulo lwezikim zotyalo-mali oluhlanganyelweyo kunye nengxowa mali enye, imali kunye nezixhobo ezisusela kwimpahla kunye nolunye ukhuseleko, ukubonelela ngengcebiso zotyalo mali kuluntu. , iinkonzo zokulungisa iintlawulo, ukutshintshiselana ngemali, ukuhanjiswa kwemali okanye ukurhweba ngemali, ukulawulwa kwempahla kunye neenkonzo zokugcina ezikhuselekileyo.
Nceda unxibelelane nathi, ukuba ufuna naluphi na uncedo lokufumana iilayisensi zeMali, Forex brokerage okanye inkampani yokungcakaza.
Asixhasi okanye aboneleli ngenkonzo yethu kudidi (lwam) lwamashishini lukhankanywe ngezantsi:
Ukuhanjiswa kwamaxwebhu odibaniselwano okanye izixhobo zokubhankisha kwindawo ekuyiwa kuyo umthengi kufuna iindleko ezongezelelweyo, ke ngoko, ziya kongezwa ngokuzenzekelayo kwi-invoice ngexesha lokuphuma. Iindleko zokuhambisa zeenkonzo zelizwe lonke ziseti ngokuzenzekelayo, ngenxa yoko, i-110 USD yongezwa ngokuzenzekelayo kwinqwelo.